Sakaizan’ny Seminera na SASEM - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny 18 marsa 1938 no niorina ny Sasem, 76 taona izy izao. Arovan’i Md Josefa izay filamatra ho an’ny fikambanana. Ny fahatsapana fa tena mavesatra ho an’ny diosezy ny famelomana ny seminera no antony tena nahatonga an’i Mgr Etienne Foucardier sy ireo Kristianina tsara sitra-po hanorina ny fikambanana. Ny tarigetra ho an’ny mpikambana dia zavatra roa loha lehibe:
Mivavaka ho an’ny seminera, misy vavaky ny Sasem atao farafaharatsiny indray mandeha isan-kerinandro: mba ho tonga pretra sy haharitra ireo voantso ary mba hijoro isaky ny Fiangonana ny Sasem.
Manampy am-pitaovana ireo izay voantso. Latsakemboka isan-taona, étole ho an’ireo hohamasinina, entanina ny kristianina hiantoka seminarista amin’ny fianarany, ets.
Ny seminera aivo na « seminaire propédeutique »
Sasem distrika Fenoarivo: (...)
Rtoa Razanadratoandro Claudine: (...)
Sasem sy ny fizakana ny seminera
Ny lahatsoratra dia hitanao manontolo ao amin'ny Lakroan'i Madagasikara laharana 3866 alahady 4 mai 2014, pejy faha12. Misaotra anao manjifa ny Lakroa .